Iindaba - Indlela yokufaka ngokufanelekileyo umnatha wokuzalisa iintaka
Namhlanje, i-anti-birdnet yimveliso esetyenziswa rhoqo, kwaye ukusebenza kwayo kuhle kakhulu kwiinkalo ezahlukeneyo. Umzekelo, ichasene nokuguga kwaye inamandla aphezulu, ukumelana nobushushu kunye nokuxhathisa kwamanzi. Ngenxa yokuba ezi mveliso zisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo, zineentlobo ezahlukeneyo, kwaye xa zibuzwa malunga nokufuya iminatha yeentaka, wonke umntu wayecinga ukuba isetyenziselwa ukuzala. Oku kulandelayo kuchaza indlela yokumisa ngokufanelekileyo umnatha wokuzala kweentaka.
Xa ufaka iinethi zokulawula iintaka zokuzala, iingcingo zentsimbi kufuneka zitsalwe. Oku kungenxa yokucotha kokuzala kweminatha yokulawula iintaka, iintsika zokungcwaba → ukutsala iingcingo zentsimbi → ukubeka iminatha. Imitha enye, umbhobho wentsimbi, nomthi zamkelekile, yaye ibhotile yeplastiki okanye intloko yelaphu ibotshelelwa kumphezulu wentsika ukuze kuthintelwe umonakalo kumnatha weentaka ezizalayo. Iingcingo zentsimbi zokuzalanisa iminatha yokulawula intaka kufuneka ziqiniswe ngaphambili, ngasemva, ngasekhohlo nasekunene, kwaye emacaleni kufuneka alungiswe ngediagonally, kwaye iingcingo ezingama-200-300 zingasetyenziswa. Ebusika, i-anti-birdnet idinga ukucocwa, enokwandisa ubomi be-anti-birdnet. Indlela yokuqokelela iminatha yokuzala iminatha yokuthintela iintaka kukuguqula indlela oyibeka ngayo. Khumbula ukuqokelela iminatha yeentaka ibe yimicu emide. Phambi kokuba uvule umnatha wokuzala kweentaka, phakamisa enye yeenatha zokuzalisa iintaka uze uzitsalele zonke kwicala locingo lwentsimbi, uzitsale ukusuka embindini ukuya kuzo zombini iziphelo. Oku konga ixesha kwaye kuvumela umnatha ukuba usasazwe ukusuka embindini ukuya kumacala omabini. Yilungise nje.
Isishwankathelo, wonke umntu ufuna ukuqonda malunga nendlela yokuseta iminatha yokuzalisa iintaka. Ndiyathemba ukukunceda. Enyanisweni, ekuqaleni, iimveliso ezenziwe ngolu hlobo lomenzi weentaka zeentaka zazingasetyenziswa kakhulu. Ngenxa yokuba abaninzi bebengayazi indlela yokuyisebenzisa, abantu abaninzi bayisebenzisa ngokuthe ngcembe yaye wonke umntu wayeyazi. Ngapha koko, olu hlobo lwemveliso lulungile kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa kangangokuba ngokuthe ngcembe luya ludumile.